Saturday December 07, 2019 - 20:11:40 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay weerar aad u xooggan oo ciidamada shabaabul mujahidiin ay shalay fuliyeen deegaanka Kutulo oo katirsan gobolka wajeer ee dhulka NFD.
War maanta kasoo baxay taliska guud ee ciidamada Booliska Kenya ayaa lagu sheegay in dhimashadu sii caga cagaynayso 11 qof.
Dadka dhintay 8 kamid ah waa saraakiil boolis oo isku dhax qarinayay gaari bas ah oo kasoo amba baxay magaalada Nairobi kunasii jeeday degmada Mandheera ee xuduud beenaadka Soomaaliya dhacda.
Ciidamo aad u hubeysan oo katirsan shabaabul Mujaahidin ayaa weerarkan fuliyay xilli dowladda Kenya ay sheegaysay in ay aad u adkeysay ammaanka,
Wali waxaa taagan cabsi ah in Al Shabaab weeraro kale geystaan in nasaarada kenyaanka ah udabaal degayaan munaasabadda waxa loogu yeero cidda kirismiska.
Dowladda Kenya waxay sheegtay in meydadka dadkii shalay lagu dilay weerarka lagasoo aruuriyay wadada hareeraheeda waxaana kamid ahaa ciidamo Boolis ah oo fasax ugasoo laabanayay Nairobi kuwaas oo ka howlgala dhulka NFD.
Dhinaca kale Uhuru Kenyatta oo ah madaxweynaha Kenya ayaa si kulul ucambaareeyay weerarkii Al Shabaab ee deegaanka Kutulo, Warsaxaafadeed kasoo baxay Xafiiska Kenyatta ayaa taczi loogu diray ehellada dadkii ay ka baxeen askartii ladilay.
Kenyatta wuxuu sheegay in uu walaac iyo murugo ka qaaday weerarkii Kutula shalay ka dhacay wuxuuna ciidamada melleteriga Kenya ugu baaqay in ay baacsadaan xoogaga Al Shabaab ee mas'uulka ahaa weerarkii shalay.